ပေါ်တူဂီ-မော်ရိုကို ပွဲကို တက်ရောက် ကြည့်ရှုမယ့် ဖီဖာဥက္ကဌဟောင်း ဘလတ္တာ
သမ္မတ ပူတင်ရဲ့ ဖိတ်ကြားမှုကြောင့် မော်စကိုမြို့ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ဖီဖာဥက္ကဌဟောင်း ဘလတ္တာ
20 Jun 2018 . 11:55 AM
အကျင့်ပျက် ချစားမှုတွေကြောင့် ဘောလုံးလောကနဲ့ ဆက်နွယ်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ ဖီဖာဥက္ကဌဟောင်း ဘလတ္တာ Blatter ရုရှားသမ္မတ ပူတင် Putin ရဲ့ ဖိတ်ကြားမှုကြောင့် မော်စကိုမြို့ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဖိတ်ကြားခံ အထူးဧည့်သည်တော် တစ်ဦးအနေနဲ့ မော်စကို မြို့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က ဘလတ္တာ Blatter ရောက်ရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျင့်ပျက် ချစားမှုတွေကြောင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှာ ဖီဖာဥက္ကဌရာထူးကနေ ဘလတ္တာ Blatter နှုတ်ထွက်ခဲ့ရပြီး ဘောလုံးလောကနဲ့ ဆက်နွယ်ခွင့် (၈)နှစ်ကြာ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရကာ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အကျင့်ပျက် ချစားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မတီက (၆)နှစ်အထိ လျော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ အသက် (၈၂)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဘလတ္တာ Blatter ဟာ ဖီဖာဥက္ကဌရာထူးကို (၁၇)နှစ်ကြာ တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ရုရှားနိုင်ငံကို ကျင်းပခွင့် ပေးခဲ့လို့ သမ္မတ ပူတင် Putin က အထူးဧည့်သည်တော် တစ်ဦးအနေနဲ့ ဖိတ်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘောလုံးလောကနဲ့ ဆက်နွယ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခံထားရပေမယ့် ဘလတ္တာ Blatter အနေနဲ့ မော်စကိုမြို့ရှိ၊ လုဇ်နီကီကွင်းမှာ ဒီနေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ကစားမယ့် ပေါ်တူဂီ-မော်ရိုကို ပွဲစဉ်ကို တက်ရောက် ကြည့်ရှုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီ-မော်ရိုကို ပွဲအပြီး စိန့်ပီတာစ်ဘတ်မြို့ကို ဘလတ္တာ Blatter ဆက်လက် ထွက်ခွာကာ သောကြာနေ့မှာ ကစားမယ့် ဘရာဇီးလ်-ကော်စတာရီကာ ပွဲစဉ်ကို ကြည့်ရှုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှားခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတ ပူတင် Putin နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်သွားဖို့ ရှိနေကြောင်း New York Times နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ဘလတ္တာ Blatter က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဘလတ္တာ Blatter ဟာ မော်စကိုမြို့မှာရှိတဲ့ St Regis Hotel မှာ တည်းခိုနေထိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သမ်မတ ပူတငျရဲ့ ဖိတျကွားမှုကွောငျ့ မျောစကိုမွို့ကို ရောကျရှိလာတဲ့ ဖီဖာဥက်ကဌဟောငျး ဘလတ်တာ
အကငျြ့ပကျြ ခစြားမှုတှကွေောငျ့ ဘောလုံးလောကနဲ့ ဆကျနှယျခှငျ့ ပိတျပငျခံထားရတဲ့ ဖီဖာဥက်ကဌဟောငျး ဘလတ်တာ Blatter ရုရှားသမ်မတ ပူတငျ Putin ရဲ့ ဖိတျကွားမှုကွောငျ့ မျောစကိုမွို့ကို ရောကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။ ဖိတျကွားခံ အထူးဧညျ့သညျတျော တဈဦးအနနေဲ့ မျောစကို မွို့ကို ပွီးခဲ့တဲ့ အင်ျဂါနကေ့ ဘလတ်တာ Blatter ရောကျရှိလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အကငျြ့ပကျြ ခစြားမှုတှကွေောငျ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလမှာ ဖီဖာဥက်ကဌရာထူးကနေ ဘလတ်တာ Blatter နှုတျထှကျခဲ့ရပွီး ဘောလုံးလောကနဲ့ ဆကျနှယျခှငျ့ (၈)နှဈကွာ ပိတျပငျခံခဲ့ရကာ နောကျပိုငျးမှာတော့ အကငျြ့ပကျြ ခစြားမှု တိုကျဖကျြရေး ကျောမတီက (၆)နှဈအထိ လြော့ခပြေးခဲ့ပါတယျ။ အသကျ (၈၂)နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ ဘလတ်တာ Blatter ဟာ ဖီဖာဥက်ကဌရာထူးကို (၁၇)နှဈကွာ တာဝနျယူခဲ့ပွီး ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို ရုရှားနိုငျငံကို ကငျြးပခှငျ့ ပေးခဲ့လို့ သမ်မတ ပူတငျ Putin က အထူးဧညျ့သညျတျော တဈဦးအနနေဲ့ ဖိတျကွားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဘောလုံးလောကနဲ့ ဆကျနှယျခှငျ့ကို ပိတျပငျခံထားရပမေယျ့ ဘလတ်တာ Blatter အနနေဲ့ မျောစကိုမွို့ရှိ၊ လုဇျနီကီကှငျးမှာ ဒီနေ့ (ဗုဒ်ဓဟူးနေ့) ကစားမယျ့ ပျေါတူဂီ-မျောရိုကို ပှဲစဉျကို တကျရောကျ ကွညျ့ရှုမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပျေါတူဂီ-မျောရိုကို ပှဲအပွီး စိနျ့ပီတာဈဘတျမွို့ကို ဘလတ်တာ Blatter ဆကျလကျ ထှကျခှာကာ သောကွာနမှေ့ာ ကစားမယျ့ ဘရာဇီးလျ-ကျောစတာရီကာ ပှဲစဉျကို ကွညျ့ရှုမှာ ဖွဈပါတယျ။ ရုရှားခရီးစဉျအတှငျး သမ်မတ ပူတငျ Putin နဲ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုတှေ ပွုလုပျသှားဖို့ ရှိနကွေောငျး New York Times နဲ့ တှဆေုံ့စဉျ ဘလတ်တာ Blatter က ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ဘလတ်တာ Blatter ဟာ မျောစကိုမွို့မှာရှိတဲ့ St Regis Hotel မှာ တညျးခိုနထေိုငျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
by Ko Kyue . 35 mins ago
ပယ်နယ်တီကြောင့် ကံကောင်းခဲ့တဲ့ ဖရိုဖရဲ မန်ယူအသင်း